norfin အစွန်းရောက်2သို့မဟုတ်3ကိုယူခြင်းသည်မည်သည့်ဆောင်းရာသီဝတ်စုံသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းအပြင်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်စုံကိုကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည့်အတိုင်းဖြည့်စွက်ပါ။ ပိုပြီးလက်တွေ့ကျပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သော် ...
မီတာ ၆၀ အထိအကွာအဝေးတွင်ဝက်ဝံထိမှန်ရန်မည်သည့်ကျည်ဆံသည် ပို၍ ထိရောက်လိမ့်မည်နည်း။ 60x30 သို့မဟုတ် 06 ကယ်လိုရီ။ ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။ ဝက်ဝံအဘို့အလက်နက်များနှင့်အရာတစ်ခု Blum M. စာကြည့်တိုက်မပါဘဲအမဲလိုက် ... ရောင်းချသူများထဲမှ ...
မော်စကိုမြို့မှာအမဲလိုက်လက်နက်တွေဘယ်မှာပစ်လို့ရမလဲ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လို့ရပါတယ် http://talks.guns.ru/forum/44/68025.html ကိုသြဒီနိတ်၊ ဖုန်း၊ တက်ရောက်သူ၊ စကားဝှက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ Kutuzovskiy တွင်အပြာရောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အလင်းနှင့်အတူရွေ့လျားပစ်မှတ်အပေါ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ...
ဘယ်ကချည်ငင်တာ၊ ကြိုးကြိုးလိုင်းဒါမှမဟုတ်ကြိုးအတွက်ပိုကောင်းတာလဲ ?? ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်တယ်။ x ကိုမနှိုင်းယှဉ်နဲ့။ ... လမ်းရထားနှင့်အတူအရာအားလုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ tyrolka ဖြင့်မီးခိုးရောင်အတွက်ငါးမျှားရာတွင်အရေးကြီးသည် ...
PVC လှေကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာခုတ်ရမည်ကိုသင်ပေးပါ။ ပြန်လိုင်းသို့စုပ်ပြီးလေကိုထုတ်ပစ်ပါနှင့်လှေအားလုံးသည် transom ဘုတ်ကိုပထမဆုံးကွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လွယ်ကူတယ်၊ ဒါက ၂၅ စက္ကန့်အတွင်းမှာငါတို့စုပုံနေတယ်။
အငူနှင့်ငါးမျှားရန်တားမြစ်ထားသည်မှာသေချာသည်။ ကိုင်တွယ်အရွယ်အစားသေးငယ်ပေမယ့်မှတ်မိလွယ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပဲ့တင်သံနှင့်လှေကို သုံး၍ သင်ငါးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ပါ။ ဒီဟာကောင်မလေးမဟုတ်ဘူး! On …
clutch ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ ??? ပွတ်တိုက်မှု clutch သည် spinning reel ၏စည် (spool) ၏ဘရိတ်ဖြစ်သည်။ လိုင်းနှင့်လှံတံ၏ခွန်အားမှညှိပေးသည်။ ဤတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ http://www.youtube.com/watch?v=9VhDaiY5jS4 / အထက်တွင်ကြည့်ပါ။
ငါးထဲမှာရှိတဲ့အနီရောင်ပိုးကောင်တွေကဘာတွေလဲ။ ငါ RYBOLOV =)) မှအဖြေကိုထည့်ပါမယ် worms ကြွက်သားထဲမှာရှိလျှင်, ဒါကဤ phylometrosis, philemetria တီကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အတွက်အန္တရာယ်မရှိသော်လည်းငါး၏တင်ဆက်မှုကိုပျက်စီးစေသည်။
သေနတ်ကိုင်လက်နက်ပါမစ်။ လူတိုင်းအတွက်ယူနီဖောင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများရှိသည်။ ရဲစခန်းတွင်ရှာဖွေပါ။ အထူးပြုလုပ်ထားသောလူများရှိသည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ချောချောမွေ့မွေ့လိုင်စင်ရသည့်အခါနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ကန်တစ်ခုငှားရမ်းခြင်းနှင့်ငါးမွေးမြူခြင်း ... ဂိမ်းသည်ဖယောင်းတိုင်နှင့်ထိုက်တန်ပါသလော။
ကန်တစ်ခုငှားရမ်းခြင်းနှင့်ငါးမွေးခြင်း ... ဂိမ်းသည်ဖယောင်းတိုင်နှင့်ထိုက်တန်ပါသလော။ ဟုတ်ပါတယ် သငျသညျထိုရေကန်နားမှာနေထိုင်ပြီးငါးနှင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်အလုပ်နှင့်အချိန်များစွာစိုက်ရမည်။
အိမ်လုပ်အမဲလိုက်စက်များလုပ်နည်း ?? ရုံစတိုးဆိုင်ကိုသွားဝယ်ပါ။ သူတို့ဟာသိပ်ကိုမများပါဘူး။ သင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘဲမတွေ့ရဘူးဆိုရင်အနီးအနားမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်မရှိတော့ဘူး။
ငါးကြင်းဘယ်လောက်ကြာကြာပေါက်လာမှာလဲ။ ပိုပြီးစမတ်ဆောင်းပါးတွေဖတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရေးမှတ်ကြပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုကလေးဘဝတွင်သာမြင်တွေ့ခဲ့ကြသောသူတို့၏ ichthyologists များ (ထိုအချိန်တွင်ပင်အားလုံးမဟုတ်ပါ) ...
Blouback စနစ်။ shutter rollback ကိုတုပသည့်အပြင် blowback system သည် (Cedar နှင့်ဆင်တူသည်) PPA-K စက်သေနတ်ဖြင့်အလိုအလျောက်လည်ပတ်ချိန်တွင်ယန္တရားကိုလည်ပတ်စေသည်။ ပစ်ခတ်ခံရသောအခါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ...
မြစ်ကြမ်းပြင်၊ လိပ်တစ်ခုနှင့်ကျောင်းမှကျက်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာငါမေ့လျော့ပြီးဖြစ်သည်။ ရာသီနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ရေကာတာသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိမ်းထားနိုင်သည်။
မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူရော်ဘာလှေအတွက်စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက် အကယ်၍ လှေကိုယ်နှိုက်သည် ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းပြီး၊ မော်တာသည်မြင်း ၁၀ ကောင်ထက်နည်းလျှင်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုပါ၊ မြင်း ၅ ကောင်ထက်ပိုသောပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းသောအင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကလေသေနတ်ကလူတစ်ယောက်ကိုသေစေနိုင်တာလား။ အဆုတ်ရောင်လူတစ် ဦး ကိုကောင်းစွာသတ်ပစ်နိုင်သည်! ဘယ်မှာရိုက်ရမလဲအနိုင်ယူ .... နဖူး၌သေလျှင်သတ်လျှင်၎င်းသည်လက်နက်ဖြစ်သည်။ Che? အဘယျသို့အဆုတ်ရောင်? အဝေးမှသတ်နိုင်သည်
ပိုကောင်းတဲ့ hatsan 125 သို့မဟုတ် gamo မုဆိုး 1250 ဖြစ်သနည်း airguns ဟုတ်ကဲ့ hatsan 125 သည်စွမ်းအားနှင့်စျေးနှုန်းသင့်အတွက်သင့်အတွက်အရေးကြီးသည်ဆိုပါက gamo hunter 1250 သည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ...
အကောင်းဆုံးဓါးလက်ကိုင်ကဘာလဲ ဘယ်ဓါးကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်သို့မဟုတ်စျေးသက်သာ? ငါသမင်ချိုထဲက, သမင်ဒရယ်ကနေလုပ်ခဲ့ ... သင့်တော်တဲ့ချိုတစ်ချောင်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်ပြုတ်ပါ။
မှိုကောက်သူများကိုမေးခွန်းမေးပါ။ ဘုံ chanterelle သိပ္ပံနည်းကျခွဲခြားခြင်းနိုင်ငံတော် - မှိုဌာနခွဲ - Basidiomycetes အတန်း: Basidiomycetes မျိုးခွဲ - Agaricomycetidae အမိန့်: Chanterelle မိသားစု - Chanterelle မျိုးစိတ်မျိုးစိတ် - Chanterelle မျိုးစိတ် - သာမန် chanterelle လက်တင်အမည်Cantharellus cibarius Fr.
ကျေးဇူးပြု၍ ဂိမ်းအတွက်ရုရှားငါးဖမ်း 3.0 ဂိမ်းရုရှားငါးဖမ်းခြင်း - ဂိမ်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုဒ်များ၊ cheat များ၊ pc ... ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ရုရှားငါးဖမ်း pc, ကုဒ်များ၊ ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းသတင်း၊
61 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 3,662 စက္ကန့်ကျော် Generate ။